Kugara patsva neInvestment yeHungary uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muHungary ye:
● Kugara nekudyara muHungary
● Ugari nekudyara kubva kuHungary
● Visa yegoridhe muHungary
● Pasipoti yechipiri kubva kuHungary
● Kugara nekudyara kweHungary nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muHungary uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muHungary uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muHungary zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nevamiriri veInvestment kuHungary kunopa mabasa ekugara nekudyara muHungary, Kugara nehurongwa hwekudyara muHungary, Kugara nehurongwa hwekudyara muHungary, kwechipiri Kugara nekudyara muHungary, huviri Kugara nekudyara muHungary, ugari uye ugari nekudyara muHungary , Kugara zvechigarire nekudyara muHungary, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muHungary, Kugara nehurongwa hwekudyara muHungary, Kugara nehurongwa hwekudyara muHungary, Citizenship nekudyara muHungary, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muHungary, Citizenship nehurongwa hwekudyara muHungary, wechipiri Citizenship nekudyara muHungary, hunyanzvi hwehukama nekudyara muHungary, kugara uye ugari nekudyara muHungary, ugari uye ugari nekudyara muHungary, hupfumi Citizenship zvirongwa muHungary, Ugari nehurongwa hwekudyara muHungary, Citizenship nehurongwa hwekudyara muHungary, wechipiri pasipoti muHungary, yechipiri passp ort zvirongwa muHungary, yechipiri pasipoti chirongwa muHungary, mbiri yechipiri pasipoti muHungary, pekugara uye yechipiri pasipoti muHungary, repamutemo repasipoti repiri muHungary, repasipoti repiri nekudyara muHungary, yechipiri ugari pasipoti muHungary, yechipiri pasipoti chirongwa muHungary, chechipiri zvirongwa zvepasipoti muHungary, vhiza yegoridhe muHungary, mavhiza egoridhe muHungary, zvirongwa zvendarama vhiza muHungary, chirongwa chendarama vhiza muHungary, vhiza yegoridhe vhiza muHungary, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muHungary, vhiza mbiri yegoridhe visa kuHungary, ugari uye vhiza yegoridhe muHungary, kugara uye vhiza yegoridhe muHungary, mugari vhiza mugari muHungary, dhiza vhiza scheme muHungary, goridhe vhiza zvirongwa muHungary.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muHungary nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muHungary yeResidency nekudyara: EUR 200,000
Nhanganyaya Hungary uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveHungary
Hungary inyika yakavharirwa muEurope inotarisana nenharaunda ye93,028 km2. Inemipendero ine nyika nomwe - wachi kubva kuchamhembe: Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, neAustria.
Hungary yakakamurwa neRwizi Danube, runoyerera kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba. Kune matatu akakosha geological locales: Iyo Great Hungarian Plain kana Alfold kumabvazuva kweDanube, Transdanubia, nzvimbo ine mabhomba yakananga kumadokero kwenzira yemvura, uye materu ekuchamhembe. Nzvimbo yakanyanya kukwidziridzwa ndeyeKekes (1,014m) muMatra Mountains. Mhedziso yepasi iri padyo neSzeged (77m), kumaodzanyemba.
Hungary ine hupfumi hwakavhurika, uye fungidziro isina kujairika inoonekwa sechinodiwa. Kufungidzira kusingazivikanwe kwave kuchichinja sekupedzisira, zvisinei, zvakawedzera kuwanda. Mufungidziri mukurusa asingazivikanwe muHungary ndiGerman, neAustria, neNetherlands, neU.SA zvakare anokosha.
33% yeindasitiri yeHungary iri muBudapest. Nzvimbo yekutengesa yeBudapest ine nzvimbo zhinji dzekutengesa uye zvitoro zvine macheni asina kujairika. Hungary inogara kumotokari dzakasiyana siyana dzekugadzira zvirimwa, semuenzaniso, Suzuki neAudi.
Iko hakuna miganho pane isingazivikanwe kuchinjana kwemari, uye masangano anogona kubata mari isingazivikanwe pasina miganho.
Wepamusoro gumi Chokwadi pamusoro peMamiriro Ekurarama muHungary
Anoshamisa basa-hupenyu mwero
Kushaya basa kwakakwira muHungary, iine chete 68 muzana yevanhu vane makore 15 kusvika 64 anoshandiswa. Pakati peavo vanoshandiswa, makumi manomwe neshanu muzana varume uye 75 muzana vakadzi. Ngazvive sezvazvingaite, huwandu hwevamiriri vanoshanda hwakareba nguva iri pasi pe61 muzana – yakaderera zvakanyanya kupfuura United States, uko 4 muzana yevashandi vanoshanda kwenguva yakareba.
Nzira dzehupenyu dzinenge dzakanyanya kuderedzwa muEU
Kusvika paGDP, Hungary yakamiswa makumi maviri nematatu kubva makumi maviri neshanu eEU nyika, pa23 muzana yezviitiko zveEU. Munzvimbo yekutungamira yenzvimbo iyi muAustria, inoburitsa kazhinji kugona kweHungary. Chimwe chiyero chakashandiswa kusarudza rubatsiro rwehurumende yeiyo shopper, Chaizvo Individual Consumption (AIC), inoisa Hungary kwechipiri-kwekupedzisira.
Kurarama nzvimbo yeHumanity kuri kuunza nyaya kujekesa pekugara musiyano
Muna 2015, hurumende yeHungary yakapedza pekugara ichitsigira kune vangangoita chikamu chikuru che1,000,000 vagari vakaparadzwa. Izvi zvisati zvaitika, mazana mashoma ezviuru zvevaHungary panguva iyoyo vakasangana nenzvimbo yekugara. Habitat yeHumanity mushumo kubva muna2014 wakacherekedza kuti chikamu chikuru chiuru chemazana maHungari vaigara nematenga asina kukwana uye nekuwedzera vaparadzanisi vakaora. Kungori pasi pechikamu chevagari (1,000,000 muzana) vanogara mumapedhi akazara, uye 44.6 muzana yevaHungarians vasingagare munzvimbo dzakakosha dzemadhorobha vanosvika kune tsvina.
Hungary ine mabasa ehutano ese, asi chiyero uye kukwana kwekuisirwa kwakaderera
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Hungary yakave nekupararira kwekuchengetwa kwekurapa kubva kuma1940, inonyatso kumira munzvimbo yechitatu muEU kusvika pamamiriro ekubatanidzwa. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemitengo yakaderera yemitero — nyanzvi dzekiriniki hadzifungire kuwana mari yakawanda muHungary sezvavaizoita mune dzimwe nyika dzeEU. Nyaya hombe ndeyekutarisa kurapa kwekufungisisa mumakiriniki, panzvimbo pekufungisisa kufunga mune mamwe mahofisi emakiriniki.
Hungary yakawana basa hombe risingazivikanwe
Kutanga mu2018, Hungary ine gore rega rega inosvika madhora 4.3 bhiriyoni pamunhu wega wega webasa risingazivikanwe bhizimusi (FDI), iko kuzorora kuzere kubva mukumira kwedambudziko remari ra2009-10. Kunyangwe izvi zvichinyanya kubva kuHungary iine mamiriro akanaka egeological pachiitiko chisingazivikanwe, nyanzvi dzemari dzisingazivikanwe dzakawedzera kutamisa pfungwa kubva kuzvinhu zvisingawanzo kubatsira uye chikafu chinogadzirira mabhizinesi kumabhizimusi ane mubayiro, semuenzaniso, kudzikisira, kushambadzira kwekutengesa, uye kugadzirisa mota.
Yakakosha uye yakasarudzika kuraira kunyoresa mwero kwakakwira
Kune vadzidzi vepuraimari vadzidzi, kunyoreswa kwakatosiyana mukufamba kwemakore achangopfuura, zvisinei, kwakagara pamusoro pe95 muzana nekuwanda. Pakukwirisa kwazvo, huwandu hwekunyoreswa hwaive 97.2 muzana muna 2009, uye zvirinani muna 2012, pa95.7 muzana. Kune vechidiki vari kuchikoro, zviyero zvakagamuchirwa zvakaenzana: zvisinei pakave nekukwira kudiki kubva 2014 yegore revachiri kuyaruka vasiri kuchikoro, huwandu hwacho hwatsvedza pazasi pe5 muzana.
Kudzidziswa kwepamusoro kunoda kuita
Ingori gumi neshanu muzana yevakareba kwenguva yakareba vane chitupa chemakore mana, iine 13 muzana yevagari vane degree rekudzidza kana zvakafanana. Aya matanho akadzika, asi vanhu vane madhigirii aya vari kuwana mibairo. Zvidzidzo zvakaratidza kuti postsecondary chikoro chinokodzera chinogona kuve chakapetwa kaviri purofiti yemumwe muHungary: makore mana emakoreji ekoreji anokodzera mubhadharo wakabhadharwa we9 muzana, nepo nyanzvi kana pamusoro inogona kuwana 72 muzana kupfuura muripo wega wega muripo.
Kufarira dzidzo yepamusoro kuri kuenderera mberi
Chiitiko chinotungamirwa ne NGO NGO HE Innovate yekuisa zviwanikwa mune epamberi dzidzo yanga ichiitika mukati memakore gumi apfuura, zvichikurudzirwa nekuderera kwesangano rinopa rubatsiro kubva kuhurumende. Pfungwa yechiitiko ichi yanga iri yekushandisa sisitimu inodzidzisa yeHungary kutsigira kuvandudzwa kwemari pamwe nevemagariro kumatunhu ari padyo pamwe neruzhinji. Izvi zvakakurudzira kuwedzerwa kuwedzerwa mune mari uye kutanga-kumusoro kugadzira pakati pevadzidzi uye kwakonzera kukura kwakasimba kwemari kumba.
Nzvimbo zhinji dzakabatanidzwa nehurumende yenyika
Kubva danho rake rezvematongerwo enyika mugore ra2010, Mutungamiriri weHungary, Viktor Orban, akawana nzira yekubatanidza akawanda anofarirwa nevezvenhau venhau kuita mubatanidzwa wekuzivisa. Izvi zviitiko zvakawanikwa zvakanaka nevamwe zvisinei hazvo kwete nevamwe - Orban anokoshesa pasina mubvunzo rubatsiro rwakawanda kubva kuvanhu vanogara munzvimbo dzinotyisa dzeHungary kupfuura zvaanoita kubva kuvanhu vanogara munharaunda dzeguta reHungary.
Dunhu reHungary rakariita rakakosha nzvimbo yekutama nzvimbo yevakadzingwa kare
Kubva chikamu chemipendero yeHungary ichifekedza kunze kwekunze kweEuropean Union, nyika yakawana vafambi vakawanda kumberi. Chero zvazvingaitika, munguva pfupi yapfuura, Hungary yakagamuchira chinzvimbo chakaomarara pakutama, icho chakadzora zvakanyanya huwandu hwevanotsvaga pekugara kubva kuMiddle East.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeHungary
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muHungary
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Hangari
Kugara nekudyara kweHungary
National Permanent pekugara mvumo (inoshanda kwemakore mashanu)
Kutora nguva yekugara nekudyara kweHungary
Mushure memakore masere (hunyanzvi hwekuva mugari wenyika)
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuHungary
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweHungary
Euro-yakasarudzika yeHungary Treasury Mabond. Kutenga zvivakwa kana chero kumwe kudyara hakuverenge. Mushure memakore mashanu, iyo mari yose inokwanisa kuregererwa, kunyangwe hazvo muzvinashawo achiri kuwana pekugara zvachose.
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweHungary
Hungary ine yakakura dzidzo system, yakaderera mutengo wehupenyu. Nyika inzvimbo yakachengeteka ine huwandu hwakaderera hwematsotsi. Zvivakwa muHungary zvakaderera kwazvo. Nyika ine inobatsira mutero system. Mvumo yekugara kuburikidza nekudyara inogona kuwanikwa mumwedzi yakati wandei.
Mhuri yekupinda muHungary
Mushure mekutambira mvumo yako yekugara, nhengo dzemhuri dzepedyo dziri murume / mukadzi uye vana vanovimba vanogona kuwana mvumo yavo zvichibva nechinangwa chekubatana kwemhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muHungary insite
Mvumo yekugara yeHungary ichapihwa zvichibva pane inodyara muzvivakwa. Iyo yakatwasuka nzira yekudyara iri kutenga maviri mafurati uye kuaroja iwo kuitira purofiti zvinangwa. Maitiro acho anotanga kubva kwauri kuiswa kweiyo LLC muHungary, iyo inobvarura dzimba. Mushure mekuti iwe unofanirwa kusarudza kuti ndeapi mafurati aunoda kutenga. Mushure mematanho aya iwe unozogashira yako yekugara mvumo kubva pamwedzi miviri kusvika mitatu. Mvumo yekugara inofanirwa kuvandudzwa kwemakore matatu, mushure menguva iyoyo unozopihwa kugara zvachose.
Mari inodiwa kuHungary
Iwo mashoma anodikanwa ekudyara huwandu iEUR 200,000. Iyi mari inokwana kukwanisa kutenga mafurati maviri, ayo achanyatso kukuunzira purofiti nekuda kwekukura kwemusika wepfuma. Iyo yekuwedzera chirongwa chemubhadharo weEUR 20,000 inodiwa. Pachave zvakare nemutero wepfuma we4% kana iwe ukatenga dzimba.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweHungary
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuHungary uye Residency ne Investment Lawyers yeHungary inopa vatengi uye mhuri dzavo muHungary nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuHungary, kugara nekudyara kubva kuHungary uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuHungary kana Golden Visa kubva kuHungary kana ugari nekudyara kubva kuHungary kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuHungary, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Hungary kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muHungary uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuHungary nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari vemuHungary:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeHungary, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeHungary, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira nyika kuHungary, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuHungary, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eHungary uye inodhura yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuHungary
Kugara nekudyara kubva kuHungary kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muHungary kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuHungary kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuHungary kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuHungary kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara kubva kuHungary.
Goridhe visa zvirongwa muHungary kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuHungary kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuHungary kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuHungary kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweHungary kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muHungary nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana yakanaka kudzoka mukudyara muHungary, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweHungary. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muHungary vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muHungary, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveHungary nekudyara muzvivakwa muHungary.
Unoda kuziva - Hungary Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reHungary rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuHungary. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuHungary inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuHungary kana kuenda kuHungary, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweHungary kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeHungary uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuHungary, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuHungary isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuHungary. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweHungary uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuHungary zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neHungary.
Duration: 2 mavhiki
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweHungary changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muHungary kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muHungary:
Residency nebasa rekudyara kweHungary hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuHungary.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveHungary hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muHungary kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuHungary.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweHungary hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muHungary.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeHungary haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muHungary.
Residency nebasa rekudyara kweHungary haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muHungary.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweHungary haruwanikwe kune vanhu veHungary vanobata mukutengesa, kuchengetedza muHungary, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeHungary haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeHungary haisi yezvitendero uye masangano avo muHungary.
Residency nebasa rekudyara mu Hangari haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muHungary.
Kugara Kwedu magweta muHungary haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muHungary.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veHungary neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muHungary kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muHungary.
Kugara nekudyara muHungary nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Kugara nekutsigira kwekudyara muHungary kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muHungary.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveHungary, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Kugara nevekudyara masevhisi eHungary inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheHungary.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuHungary vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuHungary.
Vanoziva Kugara nevekutsvaga mari kuHungary nevamiriri vezvemutemo kuHungary vachipa rubatsiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veHungary kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuHungary uye mushure mokubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuHungary
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Hungary, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuHungary kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuHungary
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweHungary ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veHungary, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweHungary uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeHungary
Maitiro Ekubvumidza Basa kuHungary
Kwekugara kwenguva pfupi muHungary
Kugara Kusingaperi muHungary
Mamishinari uye maMumiriri eHungary
Kugara neInvestment muHungary uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muHungary nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuenda kuHungary nekudyara mari, isu semumwe wako kuHungary, tiripo kuti tipe yakawanda mamwe masevhisi uye uye kana paungangoda muHungary nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweHungary, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muHungary, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veHungary vachitigadzira shopu imwechete yekumira kuHungary uye nyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuHungary mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweHungary nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye vanobatana muHungary nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muHungary kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muHungary inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muHungary
Chero ani investor anotamira kuHungary angazoda account yako yebhangi muHungary uye account yebhangi yekambani muHungary, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muHungary
Kana iwe uchida kubvunza muHungary, ye mhinduro dzemadhijitari muHungary senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muHungary kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Hungary kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muHungary kutanga pakarepo muHungary.
HR Services muHungary
Our kambani yevashandi muHungary inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muHungary vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeHungary
Bhizinesi foni nhare dzeHungary pamwe ne nhamba chaiyo yeHungary Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muHungary
Accounting, kushingairira kwakakodzera muHungary uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muHungary
Setup bhizinesi muHungary
Mushure meResidency nekudyara kuHungary, setup bhizinesi mu Hangari.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muHungary
Kugadzira Webhu muHungary
Ecommerce Kuvandudza muHungary
Webhu kuvandudza muHungary
Kuvandudza kweBlockchain muHungary
App Kubudirira muHungary
Software Kubudirira muHungary
Magweta eResidency neInvestment muHungary
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuHungary uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuHungary, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuHungary ine vamiririri vevanoona nezvekupinda muHungary, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeHungary ne kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kune vanhu veHungary nemhuri dzavo. Yedu Kugara neve timu yekudyara yeHungary inopa mhinduro dzakagadzirwa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuHungary, pamvumo yako yekugara muHungary inogamuchirwa.
Simba regweta reHungary rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muHungary. Kana iwe uri muHungary kana uronga kushanyira Hungary, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuHungary kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeHungary. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weHungary.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muHungary
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muHungary?
Kugara nekudyara kuHungary, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweHungary kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHungary kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuHungary, ugaro nehurongwa hwekudyara kweHungary. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuHungary, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muHungary, kugara kwakanyanya nemagweta ezvekudyara muHungary uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuHungary, vanoshanda pakunyatso kugara nevamiriri vezvekudyara muHungary, uye akanakisa mafemu ekubvunza vekupinda munyika. muHungary.
Kugara patsva nemabasa ekudyara mari kuHungary | Kugara nevamiriri vezvekudyara muHungary | Kugara nemagweta eInvestment muHungary | Kugara nemagweta ekudyara muHungary | Kugara nevanoona nezvekudyara kweHungary
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muHungary?
Ugari nekudyara kuHungary, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweHungary kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHungary kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muHungary. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuHungary, ugari nehurongwa hwekudyara kuHungary inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuHungary, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muHungary, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muHungary uye hunhu hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweHungary, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muHungary, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muHungary.
Inodhura Investor immigration services yeHungary | Vanodhura vanotamira kune dzimwe nyika muHungary | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muHungary | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muHungary | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kuHungary | Affordable immigration law firms kuHungary
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muHungary?
Yechipiri pasipoti muHungary, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weHungary kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHungary kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuHungary, yechipiri pasipoti chirongwa cheHungary chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eHungary, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muHungary, magweta echipiri epasipoti muHungary uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano kuHungary, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muHungary, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muHungary.
Chechipiri pasipoti masevhisi eHungary | Yechipiri pasipoti vamiririri muHungary | Yechipiri mapasipoti magweta muHungary | Yechipiri mapasipoti magweta muHungary | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuHungary
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muHungary?
Ndarama vhiza muHungary, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeHungary kuburikidza nekudyara muhupfumi hweHungary kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuHungary, chirongwa chendarama vhiza kuHungary inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi kuHungary, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muHungary, akanakisa egoridhe vhiza magweta muHungary uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi kuHungary, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muHungary, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muHungary.
Goridhe visa services yeHungary | Ndarama vhiza vamiririri muHungary | Magoridhe vhiza magweta muHungary | Magoridhe vhiza magweta muHungary | Goridhe vhiza vanopa mazano kuHungary
Ndechipi chiri chidiki kudyara kweResidency nekudyara muHungary?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muHungary iEUR 200,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuHungary yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muHungary nevamiriri muHungary vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muHungary.
Kugara nekudyara kuHungary kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuHungary uye Kugara nekudyara mari inodiwa kuHungary ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuHungary, isu tinopawo yakawanda yakawanda imwe rutsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuHungary kana investor visa kuHungary?
Kugara patsva nemabasa ekudyara mari kunogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuHungary kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuHungary kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuHungary kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeHungary
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuHungary
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeHungary
Kubatanidzwa kweVashandi veHungary Vashandi uye maIndasitiri
National Szechenyi Raibhurari
Zviratidziro muBudapestMAV njanji kubatanaHangari
Budapest Chamber of Commerce neindasitiri
Hungari CentralStatistical Hofisi
ChiHungary Tsika Yepamberi
YeHungary Dhipatimendi Misheni Kunze
Hungary Chamber of Commerce neindasitiri
Ministry of Foreign Affairs uye Trade
Mumiriri weHungary muUS
Zvekune dzimwe nyika Misangano muHungary
ChiHungarian Peji Peji
Link to Dhipatimendi Rekupinda muHungary , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muHungary